Boorana magaalaa Moyaaleetti Dargaggoonni lama poolisoota pp tiin ajjeefamuutti mufachuun ummanni fincilatti seenee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBoorana magaalaa Moyaaleetti Dargaggoonni lama poolisoota pp tiin ajjeefamuutti mufachuun ummanni fincilatti seenee jira.
#Sumaalee duuban diyaasphooran PP tokko tokkoo ka yoo fedhe PP of fakkeessuu, ka yoo fedhe falma mirga dhala namaa of fakkeessuu jiraachuun mirkana. Dhaabbanni mootummaa Ixoophiyaa kan lola akkanaa sponsor godhus jiraachuu qaamoonni tokko tokko dubbachaa jiru.
Kanaaf dhaamsii keenna; Ummatii Booranaafi Gabraa, akkasumas dheeda Gama Liibaniitti Booranaafi Gujiin warra Sumaalee kan isan irratti okkora uumaa jiru duuba shirrii guddaan waan jiruuf lolatti hin galinaa! Hanga danda’amee hundaatti karaa nagaafi tasgabbiitin rakkoon dhalatte akka furamtu hojjadhaa!
MNOs ykn PPn Oromiyaa gaaffii daangaa Oromiyaa kan Ummata Oromoo dheeda Liibaniiti ka’aa jirtu ukkaamsuuf shira kan dalaguu waan danda’uuf ; waldeennaa jaarrolee raabaa gadaas taye qaamoota akka akkaa hirmaachisan kamiyyuu irratti of-eegannoo godha!
@.Irree fi gaachannii ummata oromoo kan ta’e Wbo,n godina gujii lixaa,cibiraa gumaa baasaa Tuulaa surroo,Aanaa galaanaa ganda boorree bakka addaa gaara soonsaa jedhamutti,gaafa guyyaa 9/3/2021,sa’a 5:00 AM ergamtoota PP kaabinoota Aanaa galaana duula filannoo fi saamichaa ummata irratti gaggessaa turte tarkaanffi irrattii fudhateen du’aa fi madoon adabee jira.komaandeeriin ganda wadoo darbaa kan maqaan isaa Tuute edeema jedhamus du’era. Motoriin isaanillee guutummaatti ibiddaan Barbaadeessuun ,meeshaa AKM lama ,dokumeentii gara garaa,bilbilootaa harka,maallaqa,fi meeshaawwan hedduu booji’uun dantaa qabsoo bilisuummaa ummata oromoof olcheera.
Abon Agratuu Oromoof Oromiyaatti
#Breaking_News. Qiliinxoo keessatti waliti bu’iinsi sabaa Oromoofii Garee Nafxanyaa juddutti uumamee jira.